Ogaden News Agency (ONA) – War-Murtiyeedka Shirkii Wada-tashiga ee Jaaliyaadka Pacific-ga.
War-Murtiyeedka Shirkii Wada-tashiga ee Jaaliyaadka Pacific-ga.
Posted by Daljir	/ January 9, 2017
Bayaankii Shirkii wadatashiga Jaaliyaadka Ogaadeenya ee wadanka Australia.
Waxaa si habsami leh usoo gabogaboobay shir ay isugu yimaadeen xubnaha jaaliyaadka wadanka Australia oo socday intii uu dhaxaysay 07/01/2017 -08/01/2017.
Shirka waxaa kasoo qayb galay dhamaan wakiilo ka kala socday Jaaliyaadka Pacific-ga, sida New south Walls, Victoria, Queensland iyo Western Australia oo ahayd goobta shirka marti galisay, Sidoo kale waxaa shirk aka qayb galay Gudoomiye-ku xigeenka JWXO Mudane Maxamed Ismaaciil, Af-hayeenka jwxo Mudane Cadaani Hiirmooge iyo masuuliinta Golaha dhexe eek u sugan Pacific-ga,
Shirka waxaa lagu lafo guray arimo muhiim ah oo khuseeya xaaladda Geeska Afrika guud ahaan gaar ahaan midda gumaysiga Ethiopia. Sidoo kale waxaa lagu qiimeeyay heerka wanaagsan ee uuu marayo halganka shacbiga ah ee ay ku jirto umada reer Ogaadeenya kaasoo ay hormuud ka tahay JWXO. Shirku intii uu socday waxaa la isla qaatay in halganka uu gaadhay heer aad u wanaasgan oo uu ka quustay gumaysigu in uu muquuniyo.
Shirku wuxuu bogaadin usoo jeedinayay Ciidanka Xoraynta Ogaadeenya (CXO) oo muujiyay adkaysi geesinimo iyo tayo aan lagu arag ciidan noociisa ah. Waxaa si gaar ha loogu bogaadiyay CXO doorkii uu ka qaatay difaaca weeraradii gumaysigu ku soo qaaday shacabka dulman ee ogaadeenya.
Sidoo ale waxa la bogaadiyay doorka qiimaha leh ee shacabka Ogaadeenya ka qaateen halganka lagu xoraynayo wadanka Ogaadeenya iyadoo si gaar ah loogu bogaadiyay Jaaliyaadka Ogaadeenya ee ka dhisan daafaha caalamka.
Shirkiu wuxuu cambaaraynayaa maamulada ka dhisan Jamhuuriyada Soomaaliya oo aan wali ka tanaasulin in shacabka aan waxba galabsanin ee Ogaadeenya ee u safra deegaanadooda u gacan galiya gumaysiga Ethiopia. Waxaa loo soo jeediyay maamuladaasi inay ka waantoobaan ficilada caynkaas ah oo keeni kara in uu xumaado xidhiidhka dhaqan iyo dhiig ee ka dhaxeeya dadka walalaha ah ee Soomaaliyeed ee dariska ah.
Shirku wuxuu baaq u dirayaa dhaman shacab ka Ogaadeenya inay sii dardar galiyaan halganka ay ugu jiraan xoraynta dalkooda siina laban laabaan taageerada ay u fidinyaan CXO ee u taagan difaaca dalkooda, dadkooda iyo diintooda.
Waxaa shirku uu ugu baaqayaa shacabka Soomaalida Ogaadeenya ee ku dhaqan gudaha wadanka in ay si dhiiranaan leh uga qayb qaataan kacdoonka iyo mudaharaadyada ka socda Ethiopia ee looga jeedo in laiskaga dulqaado maamulka dhiig miiratada ah ee Wayaanaha.
Ugu dambayntii shirku wuxuu ugu baaqayaa dhalinyarta maskaxda laga khalday ee u adeega gumaysiga inay ka waantoobaan dhibaatooyinka ay kuhayaan shacabkooda iyagoo ku raali galinaya gumaystaha.